Imibandela | Indlela Engcono Kakhulu mhlophe Amazinyo Guide
Siyakwamukela ku-site yethu. Uma uqhubeka ukuba uhlole bese ukusebenzisa lolu website uvumelana ukuba athobele futhi baboshwe imigomo nemibandela elandelayo yokusetshenziswa, okuyinto ndawonye yemfihlo yethu ezibusa ubudlelwane bethu site nawe maqondana kule website.
Leli gama site yethu noma 'us’ noma 'si-’ ibhekisela umnikazi we website. Igama elithi 'wena’ libhekisela umsebenzisi noma obuka website yethu. Ukusetshenziswa kwalesi website kuncike imigomo elandelayo yokusetshenziswa:
Okuqukethwe emakhasini le website ukuze uthole ulwazi lwakho jikelele kanye nokusetshenziswa kuphela. Kuyinto uyashintsha ngaphandle kwesaziso.
Akekho kithi noma yimuphi besithathu mawaranti noma isiqinisekiso mayelana nokunemba, Ukwenza, ukusebenza, ukuphelela noma efanelekile ulwazi kanye ngezinto ezitholakala noma ehlinzekwe kule website kwanoma iyiphi inhloso. Uyavuma ukuthi ulwazi anjalo nezinto zokwakha bangase inezinto ezinganembile noma amaphutha futhi thina ngokucacile ngakususi icala nganoma yisiphi lezo zinto ezinganembile noma amaphutha ngokugcwele kuvunyelwe ngumthetho.
Ukusebenzisa kwakho kwanoma yiluphi ulwazi noma izinto kule website ngokuphelele engozini lakho siqu, okuyiwona asiyikulima kube nesibopho. Kuyakuba umthwalo wakho siqu ukuqinisekisa ukuthi noma iyiphi imikhiqizo, amasevisi noma Ulwazi olutholakala kule website ukuhlangabezana nezidingo zakho ethize.
Le-website iqukethe impahla okuyinto aphethwe noma onelayisensi kithi. Lokhu kwaziswa kuhlanganisa, kodwa hhayi kungagcini, design, layout, bheka, ngokubukeka ihluzo. Ukuveza kungavunyelwe ngaphandle ngokuhambisana isaziso se-copyright, oyingxenye migomo nemibandela.
Zonke izimpawu zokuhweba yakhiqizwa kule website, ezingeyona impahla ka, noma onelayisensi ukuze opharetha, beqashelwa kwi website.
Ukusetshenziswa kwale website kungase kuphakame sezinxephezelo kanye / noma kube icala lobugebengu.
Ngezikhathi ezithile le website kungase futhi amalinki kwamanye amawebhusayithi. Lezi links kuhlinzekelwe esivumelana nawe ukunikeza ulwazi olwengeziwe. Abazi likhombise ukuthi sivumelana nakho website(s). Asinawo umthwalo okuqukethwe kwe-website kuxhumene(s).
Awukwazi ukudala isixhumanisi kule website kusuka kwenye website noma idokhumenti ngaphandle kwemvume ebhaliwe site yethu.